ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းတော်မှ အက္ခရာတစ်လုံးကို ရွတ်ဖတ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသူသည် ကောင်းမှုတစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမှုတစ်ခုသည် ကောင်းမှုဆယ်ခုနှင့်ညီမျှသည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းတော်မှ အက္ခရာတစ်လုံးကို ရွတ်ဖတ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသူသည် ကောင်းမှုတစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမှုတစ်ခုသည် ကောင်းမှုဆယ်ခုနှင့်ညီမျှသည်။
အိဗ်နုမတ်စ်အူးဒ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ မည်သူမဆိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကျမ်းတော်မှ အက္ခရာတစ်လုံးကိုရွတ်ဖတ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသူသည် ကောင်းမှုတစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမှုတစ်ခုသည် ကောင်းမှုဆယ်ခုနှင့်ညီမျှသည်။ ငါကိုယ်တော်သည်(အလိဖ် လာမ် မီးမ်)ကို အက္ခရာတစ်လုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ သို့သော် (အလိဖ်)သည်အက္ခရာတစ်လုံး (လာမ်)သည် အက္ခရာတစ်လုံး (မီးမ်)သည် အက္ခရာတစ်လုံးဖြစ်သည်။
အိဗ်နုမတ်စ်အူးဒ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဤဟဒီးဆ်တော်၌ ဆင့်ပြန်ထားသည်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ မည်သည့်မွတ်စ်လင်မ်မဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းတော်မှ အက္ခရာတစ်လုံးကို ဖတ်ရွတ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသူသည် အက္ခရာတစ်လုံးတိုင်းတွင် ကောင်းမှုဆယ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏မိန့်ကြားချက်ဖြစ်သည့် “ငါကိုယ်တော်သည်(အလိဖ် လာမ် မီးမ်)ကို အက္ခရာတစ်လုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။” ၏ ဆိုလိုရင်းမှာ အက္ခရာသုံးလုံးပါရှိသော စကားလုံးကို အက္ခရာတစ်ခုဟု ငါကိုယ်တော်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ (အလိဖ်)သည် အက္ခရာတစ်လုံး (လာမ်)သည် အက္ခရာတစ်လုံး (မီးမ်)သည် အက္ခရာတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ထိုစကားလုံးအား ရွတ်ဖတ်သောသူသည် ကောင်းမှုသုံးဆယ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကြီးကျယ်လှသော နိအ်မသ် စည်းစိမ်နှင့် အကျိုးကုသိုလ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူသားသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကျမ်းတော်အား မြောက်မြားစွာရွတ်ဖတ်သင့်သည်။
1: ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ဖတ်ရွတ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
2: ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ဖတ်ရွတ်သူသည် ၎င်းရွတ်ဖတ်လိုက်သည့် စကားလုံးတိုင်းရှိ အက္ခရာအရေအတွက်နှင့်အမျှ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
3: အက္ခရာ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် အက္ခရာနှင့် စကားလုံးကြား ကွာခြားချက်ကို ရှင်းပြထားသည်။
4: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျယ်ဝန်းလှသော ကရုဏာတော်နှင့် ရက်ရောမှုတို့ကြောင့် အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏ကျွန်များအတွက် အကျိုးကုသိုလ်ကို အဆပေါင်းများစွာ တိုးပေးတော်မူသည်။ ဤသည် အရှင့်ထံတော်မှ ကျေးဇူးပြုမှုနှင့်ပေးကမ်းချီးမြှင့်မှုပင်ဖြစ်သည်။
5: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ (စကားတော်) မုက္ခပါဌ်တော်သည် အသံနှင့် အက္ခရာတို့ ပါရှိကြောင်း အတည်ပြုထားသည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .